Interoperability site na Cloud: Otu esi eme ya? | Site na Linux
Interoperability site na Cloud: Otu esi eme ya?
Ọganihu nke Teknụzụ Ozi na Nkwurịta Okwu (ICT) ugbu a etinyela iwu nke oge a, karịsịa na mpaghara inye azụmahịa, azụmahịa na ọrụ ego, ma nke ọha ma nke onwe, maka abamuru nke ndị ọrụ ya (ndị ahịa na ụmụ amaala), mkpa maka Systems Systems (B Information) na-emewanye mmekọrịta.
Imata ma ghota ihe obula gbara gburugburu isiokwu banyere Interoperability of Systems Systems, site na igwe ojii (Intanet), dị mkpa maka mmadụ ọ bụla, ma ndị nkịtị ma ndị ọkachamara, ebe ọ bụ na nkwado nke mmekọrịta dị n'etiti ndị na-ahazi n'etiti onwe ha, na ndị a na ndị gọọmentị na mmepe nke mmemme ma ọ bụ ọrụ, yana nke ọ bụla ha nwere njikọta, mmekọrịta na mmeju, ọ ga - eme ka nkwado ụmụ amaala ka ukwuu, na n’aka nke ya, imeziwanye ndụ nke mmadụ niile.
3.1 Mmekọrịta mmekọrịta
3.2 Mmekọrịta nzukọ
3.3 Teknụzụ mmekọrịta
3.4 Gọọmentị Interoperability
Ebumnuche nke inwe ike ịkekọrịta data (ozi) n'ụzọ zuru ụwa ọnụ na uzo, nke ahụ bụ, n'agbanyeghị nkà na ụzụ nke na-akwado nchekwa ya, nhazi ya ma ọ bụ nkesa ya, O soro mmalite nke mmadụ na mmepe nke ICT kemgbe mmalite ya. Ihe obula mmadu kere site na ide (akwukwo ozi, onu ogugu, oge nke oge) rue Media ugbua (Press, Radio, TV and Internet) nwere ebumnobi di nkpa iji nweta nkwurita okwu, mkparita uka na nghota.
N'ihi ya, Ọganihu ma ọ bụ mmelite nke ọnọdụ (teknụzụ, akụrụngwa, nyiwe) maka mgbanwe nke ozi kwesịrị ịbụ akụkụ transcendental ma maka otu na ụlọ ọrụ na maka mba ọ bụla n'ozuzu., iji nweta mmepe nke ngwọta kọmputa nke na-emeri njedebe na njehie nke oge gara aga. Mmachi na njehie nke emepụtara site na teknụzụ nke dabere na mkpa (mkpa), na-enye "Computer Islands".
Agwaetiti kọmpụta nke ejiri njikwa na-adịghị arụ ọrụ na-ejikọtaghị ọnụ, nke na-eme ka mmekọrịta dị n'etiti ha agaghị ekwe omume ma gbochie, dịka ọmụmaatụ, na ụmụ amaala nwere ike ịme usoro steeti n'otu ebe. Dịka ọmụmaatụ, n'ihi nke a, gọọmentị na-achọ ịtọlite ​​windo windo elektrik nke Ọchịchị ka ụmụ amaala na ụlọ ọrụ nwee ike ịme usoro ha n'ịntanetị. Ndi otu na-acho ime ka ngwa ahia na oru ha kwekorita ma dikwa n’elu ndi nke ozo.
Nke a bụ kpọmkwem ebe echiche nke mmekọrịta mmekọrịta batara. Echiche nke nwere ike inwe ọtụtụ nkọwa na obere ọdịiche, mana na n'ọtụtụ ọnọdụ, a na-egosipụtakarị dịka:
"Ikike nke usoro ICT, na usoro azụmaahịa ha na-akwado, ịgbanweta data ma mee ka o kwe omume ịkekọrịta ozi na ihe ọmụma". (ECLAC, European Union, 2007) (Lueders, 2004)
Asụsụ ISO / IEC 2382 Okwu na Teknụzụ na-akọwa echiche nke mmekọrịta mmekọrịta dị ka:
"Ikike ikwurịta okwu, ime mmemme, ma ọ bụ bufee data n'etiti ngalaba dị iche iche na-arụ ọrụ ka onye ọrụ ahụ ghara inwe mkpa ịmata njirimara pụrụ iche nke ngalaba ndị a." (ISO, 2000)
Maka ndị ọzọ, ọkachasị na gọọmentị ma ọ bụ ọkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nkọwa nke mmekọrịta mmekọrịta na-akọwakarị:
«ikike nke ndi iche iche na ndi otu di iche iche na-emekorita ha na ebumnuche. Mkparịta ụka a na-egosi na òtù ndị ahụ metụtara ịkekọrịta ozi na ihe ọmụma site na Usoro Inter-Institutional, site na mgbanwe ntanetị nke data n'etiti usoro teknụzụ ozi ha iche.
Ihe a na-akọwakarị, dị ka nchọta gọọmentị na-enye n'usoro inye ndị obodo ha ọrụ kacha mma (Ensmụ amaala na comptù) na-agbaso ụkpụrụ nke mmeghe ndekọ (iji zere mbiputegharị arịrịọ Ozi ma ọ bụ usoro), yana windo na-alụbeghị di (iji zere nzukọ ma ọ bụ nsogbu ndị ozi na enweghị nhazi).
Bibfọdụ akwụkwọ ọgụgụ na-ekekarị mmekọrịta n'etiti ụzọ 4, nke bụ:
Ọ na-echegbu onwe ya n'ịhụ na nghọta pụtara nke ozi agbanwere ga-ekwe nghọta n’emeghị ihe ọ bụla site na ngwa niile metụtara azụmahịa enyere ma na-enyere sistemụ aka ikpokọta ozi anatara na ihe ọmụma ndị ọzọ ma si otú a hazie ya nke ọma.
Ọ bụ ọrụ ya maka ịkọwa ebumnuche azụmaahịa, usoro ịme ngosi uwe na ịkwalite mmekorita n'etiti gọọmentị ndị chọrọ ịgbanwe ozi ha nwere ike ịnwe usoro nhazi na usoro dị n'ime. Na ntuziaka, dabere na ihe ndị obodo ndị ọrụ chọrọ, ọrụ ndị a ga-enwerịrị, dị mfe nghọta, ịnwetanwu na iji ọrụ.
Na-ekpuchi okwu ndị metụtara teknụzụ (HW, SW, Telecom), dị mkpa iji jikọọ sistemụ na ọrụ kọmputa, gụnyere akụkụ ndị dị mkpa dị ka ihu na-emeghe, ọrụ njikọta, ntinye data na midwe, ngosi data na mgbanwe, nnweta na ọrụ nchekwa.
Mgbe States (Gọọmentị) na-etinye aka na usoro mmekọrịta mmekọrịta, usoro a ma ọ bụ ụdị a na-eme nke ahụ ọ na-ezo aka na nkwekọrịta dị n'etiti gọọmentị na ndị na-eme ihe nkiri metụtara usoro mmekọrịta na otu esi enweta ha. Site na nchịkwa, a na-achọ ka ndị ọrụ gọọmentị nwee usoro ntọala dị mkpa iji guzobe ụkpụrụ mmekọrịta, hụ na a nakweere ha, ma nye ndị ụlọ ọrụ ikike nhazi na ọrụ ọrụ dị mkpa iji tinye ha n'ọrụ.
E nwere ọtụtụ teknụzụ dị ugbu a iji nweta usoro mmekọrịta, ọkachasị na ọkwa gọọmentị. Otu n'ime ha na-abụkarị ihe ojiji Ọrụ Weebụ (Ọrụ Weebụ ma ọ bụ WS), nke bụ ihe ọ bụla karịa usoro usoro na ụkpụrụ ndị na-enye aka ịgbanwee data n'etiti ngwa (Ngwa).
WS na-akwado mgbanwe data n'etiti ngwa dị iche iche mepụtara site na asụsụ mmemme dị iche iche, ma gbuo ya na nyiwe OS dị iche iche, ka e wee gosipụta ha na Ngwaọrụ, Akụrụngwa ma ọ bụ Platform ọ bụla ejikọrọ na Internetntanetị. WSs bụ ihe eji arụ ọrụ ọhụụ maka ngwa iji were ịntanetị na-ekwurịtakwa okwu.
Ha na-eweta elele bara uru na usoro mmekọrịta ebe ọ bụ na ọ na-enye ohere Ngwa n'agbanyeghị ụdị njirimara ha ma ọ bụ ikpo okwu igbu ha iji kwurịta okwu, site na ịtọlite ​​ụkpụrụ na usoro ederede ederede, na-enyere ohere ịnweta ọdịnaya (Ozi / Data) na nghọta ziri ezi nke ọrụ ya.
N'ime ụkpụrụ kachasị eji na WS anyị nwere:
XML: Asụsụ nhụbàràama nkè ikike
NKP: SOAP (Protocol Nnweta Nnukwu Ihe)
WSDL: WDSL (Asụsụ Ozi Nkọwapụta Ọrụ Weebụ)
UDI: UDDI (Nkọwa zuru ụwa ọnụ, Nchọpụta na Mwekota)
Otu n'ime ụdị WS kacha mara amara bụ:
Ọrụ ntanetị nke SOAP: Nke ahụ na-eji ozi XML eme ihe na-esote ọkọlọtọ SOAP, na iji WSDL na ntanetị ha.
Ọrụ webụsaịtị dị mma: Nke ahụ na-eji HTTP, URI, MIME, eme ihe iji rụọ ọrụ dị mfe ma ọ bụ na-enweghị oke.
Ọchịchọ maka mmekọrịta nke sistemụ dị iche iche, ma ọ bụ nke ọha ma ọ bụ nke onwe, ma obu n'etiti ha, nwere ike ịbawanye n'ụzọ dị mma, uru na uru, mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma ọ bụ nke azụmahịa, dị ka nwa amaala dị mfe, dịka ọkachamara ọkachamara ma ọ bụ nnukwu onye ọchụnta ego ma ọ bụ onye ndu ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Njikọ njikọ nke nkwekọrịta, usoro na ụkpụrụ ụlọ nwere ike melite ikike ịnye na afọ ojuju ngwaahịa, ngwaahịa na ọrụ kwesịrị ekwesị, na-ebelata mmetụta nke njehie nke oge, arụmọrụ ma ọ bụ enweghị nkwekọrịta.
Ọnọdụ niile dị n'elu dị ka mmekọrịta dị ka isi ihe iji nye onye ọ bụla ezigbo ọrụ ọha na eze na ọrụ nzuzo, rụọ ọrụ nke ọma ma dị ọnụ ala. Mbelata arụmọrụ, mbipụta abụọ, nkụda mmụọ na ọbụlagodi ụgwọ.
Ọbụna n'ọnọdụ ụfọdụ, nweta mmụba na ịnweta ọbụlagodi ọkwa dị elu na arụmọrụ bara uru, site na otu gburugburu ebe obibi n'ụzọ bara uru ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya, ya bụ, na ịrụ ọrụ nke ọma, uru, mmeghe, nchedo, nkeonwe, mgbanwe na asọmpi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Interoperability site na Cloud: Otu esi eme ya?
Emepụtara Fuchsia OS RC mbụ izu ole na ole gara aga ma ole na ole hụrụ